Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya iyo haya’adaha QM oo codsanaya roobabka ka dib gargaar ay abaaraha Ogadenya kaga hortagaan !!
Itobiya iyo haya’adaha QM oo codsanaya roobabka ka dib gargaar ay abaaraha Ogadenya kaga hortagaan !!
Waa arin lala yaabo biya la’aanta iyo abaaraha aan laga hadlin 3exdii bilood ee la soo dhaafay goortaa oo gobolada qaar oon iyo gaajo loogu dhintay iyadoo waliba ay ciidamada Itobiya ka fadhiisteen ceelashii una diideen dadkii xoola dhaqatada ahaa inay ka cabaan ceelasha ama ka waaraabiyaan xoolahooda ee hadda markii raxmadda Ilaahay ay da’day la soo hadal qaadayo.
Sidii laga filayay gumaysiga Itobiya waxay ka codsadeen haya’adaha caalamka ee deeqda bixiya inay gargaar dagdag ah la soo gaadhaan dadka ku tabaalaysan abaaraha ku dhuftay Ogadenya iyo meela kale oo ka mid ah dalkooda. Sidoo kale ayay haya’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha aadamiga OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ayay hadda u soo saartay baaq ay kaga waramayaan biyo la’aanta ka taagan waddanka iyagoo sheegay in dad lagu qiyaasay 2ba milyan ay ku tabaalaysan yihiin halkaa.
Waxay wararku sheegayaan inay Itobiya codsatay in la siiyo $75 milyan oo dheeraad ah bishan iyo bisha soo socota eeMay taasoo ay ku magacawday inay gargaarka aadminimo ku bixinayso, sidoo kale ayay hay’adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka u codsadeen in la siiyo lacaga dheeraad bilaha soo socda ay ku bixnayaan gargaarka .. (The Ethiopian Government has requested an additional $75 million for humanitarian assistance this month and in May, while UN agencies and their partners have called for more resources to meet increasing needs and expand operations in the coming months to avoid gaps in aid delivery.)
Arimahan oon horay u ogayn, Gudoomiyaha Jabhaddana uu horey ugu sheegay saxaafadda caalamka in marka uu dhulka waraabo ee la doonayay inay shacabka u dhaqaaqaan inay beeraha meegeeyaan iyo marka uu dalagga soo go’o ee beeralayda ay suuqyada keenaan wixii u soo baxay inay dawladda Itobiya u fasaxdo haya’daha QM iyo kuwa NGO,s-ka inay dalka soo dhoobaan qamandi iyo raashin kale. Ujeedada ka dambaysa way iska cadahay, waana arin uu shacabkeena hadda ogaaday ujeedada laga leeyahay.
Ilaahay baa mahadoo idil iska leh, marba hadii ay raxamadii Ilaahay camimtay dalka, waxaa loo dhaqaaqi doonaa beerta in la abuuro, taasoo fashilnaysa hadafka gumaysiga ee ah inaan laga xoroobin qamandida farqaha loo hoorsanayo.